Ukubukwa bengenandaba - kuyingxenye ebalulekile yokuphila zezombusazwe
ukubukwa bengenandaba - lawa izinqumo zezombusazwe, lapho umuntu ngokuphelele hhayi nesithakazelo kwezombangazwe, futhi akanayo umbono ikakhulukazi kule ndaba.
Ngokuvamile, kufanele kuphawulwe ukuthi inqubomgomo - iyingxenye ebalulekile ukuphila kwawo wonke umuntu kanye nomphakathi wonkana. I degree of komphakathi kuncike ngokuqondile ekutheni unesithakazelo izinkinga engokoqobo.
Noma kunjalo, manje ukuhlukanisa izinhlobo eziningana imibono yezombangazwe, kuhlanganise amehlo ngabandayo - lena eyodwa kuphela izigaba lapho engxenyeni ethile labantu ezweni ngalinye. Yiqiniso, kuncike zohulumeni isinyathelo futhi uhulumeni nezikhulu ngamaphesenti zingase zehluke, kodwa khona njalo kuqinisekiswe. into enjalo kungenxa yokuthi izintandokazi zezombusazwe ngabandayo ekhungethe izingane, futhi kwezinye izimo kanye nabantu abadala. Zonke ezinye e ngandlela-thile kuyokwenza ihileleke isimiso sezombangazwe sakhona.
Yiqiniso, it is waphuzisa. izintandokazi (kuhlanganise ngabandayo) - ukukhetha siqu ngamunye. Ngesikhathi esifanayo, kufanele kuqashelwe ukuthi ukuthuthukiswa ngokugcwele nangokuphumelelisayo isakhiwo isimo kubaluleke kakhulu iqhaza inani elikhulu kunawo kungenzeka zabantu. Ngoba ikuvumela ukuthatha ngokugcwele ku-akhawunti intando abantu, izintandokazi zabo nezifiso. Lokho kubanika, ivumela ekusetshenzisweni ngokugcwele izinsiza - kokubili ngokwezimali futhi zemvelo, abasebenzi nokunye. ukubukwa bengenandaba - wukuthi ngesikhathi esifanayo ikuvumela sigwema noma ikuphi ukuhlangana e emikhankasweni yezombusazwe, kodwa ngesikhathi esifanayo ubonise isimo sakho sengqondo.
Umqondo "ngabandayo" sici hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa mpikiswano zezombusazwe, kodwa futhi ngoba ezinye izindawo eziningi izenzo zabantu. Ngokwesibonelo, isinqumo esinjalo kwamakhemikhali kuyinto ephelele cishe incazelo oxide impahla okungadingi ngibonise noma yikuphi ukulangazelela izakhiwo esidi noma eziyisisekelo. Ngenxa yalokho, ekhuthaza enjalo kungenziwa ngokuthi i ngabandayo kokungathathi hlangothi, futhi ungabi nandaba.
Umqondo ofanayo angasetshenziswa ukuze uveze imibono kanye izintandokazi zakho nganoma isiphi imihlangano yomphakathi. Ngakho, yini nje ukukhombisa izinga labo erudition, kodwa futhi enhle ubalekele impendulo.
Noma kunjalo, igama elithi enjalo avame ukuyisebenzisa kwezombusazwe. On kwencazelo "ngabandayo" imfanelo umuntu engibathandayo akunandaba ukuthi ubani amakhosi amahlanu ayesewile, uyini wezombusazwe kuleli zwe lapho uhlala. It kubonisa ukungabi nandaba okugcwele lomuntu ukuphila kwawo ngokuqondene nezombusazwe bebonke.
Ngakho, emehlweni ngabandayo - yigama lisikisela nandaba ezithile kanye lamabutho kusukela izenzakalo ezenzeka kokubili kwezepolitiki kanye nezinye, izindawo ezibalulekile ngokulinganayo yokuphila komuntu.
Ezemfundo Kids Drawing
Nevada: izithombe ezihehayo